အမျိုးသမီးများအတွက်လက်ပြတ်မဲ့လက်ဆပ်အနီရောင်ဂါ ၀ န်အ ၀ ယ် - အခမဲ့သင်္ဘောတင်ခနှင့်အခွန်လုံးဝမ ၀ ယ်ပါနှင့် WoopShop®
အမျိုးသမီး ၀ တ်အဆင်မပြေလက်တိုလေးတွူးနီနီဂါ ၀ န်
$14.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $19.99
Kid Size ကို 90 100 110 120 130
အမျိုးသမီး ၀ တ်လက် ၀ တ်မပါသောကျောပိုးအိတ် Tutu အနီရောင်ဂါ ၀ န် - ၉၀ backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်း: soft သိုးမွှေး
Dresses Length: ဒူးခေါင်း - အရှည်
ကော်လာ - စတုရန်းကော်လာ
Fit: ပုံမှန်ထက်သေးငယ်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဒီစတိုးဆိုင်၏အရွယ်အစားအချက်အလက်ကိုစစ်ဆေးပါ
Built-in Bra: မဟုတ်ပါ
30 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
ချစ်စရာ! သို့သော်ခရစ္စမတ်ပွဲအတွက်ကျွန်ုပ်အချိန်မရခဲ့ပါ။ အနည်းဆုံး2လကြိုတင်မှာယူရန်အကြံပြုပါသည်။ 1/7/21 ကိုလက်ခံရရှိနှင့် 11/11/20 အပေါ်အမိန့်ပေးခဲ့သည်
အရွယ်အစားအလွန်ကောင်းမွန်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သမီးသည်များသောအားဖြင့် ၃ နှစ် ၀ တ်ပါသည်။ မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုမြန်သည်
ဖောက်သည် 5.0 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကို5/ 73231 ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။